प्रधानमन्त्रीलाई गगनको प्रश्न : डा. केसीसँग संवाद नगर्दा तपाईंको मान बढ्छ? « AayoMail
प्रधानमन्त्रीलाई गगनको प्रश्न : डा. केसीसँग संवाद नगर्दा तपाईंको मान बढ्छ?
कांग्रेस सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले असनरत डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गराउनका लागि सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने बताएका छन्।
सरकार आफैले गरेका बाचाहरू पूरा नगर्दा नै ति विषयहरू अहिले गोविन्द केसीका माग बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ‘तपाईँ आफैले हिजो गरेको बाचा पूरा नगर्दा नै यी विषय आज माग बनेका होइनन् र? डा. केसीसंग संवाद नै गर्दिनँ भन्ने तपाईँको हठले के तपाईँको मान बढाउँछ?’
थापाले सत्याग्रहीमाथि दूराग्रह राखेर वेवास्ता गर्दा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
‘पूरा गर्न सकिने र गर्नुपर्ने माग छन्, पूरा गर्नुहोस्। यसमा हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ। तर,एउटा सत्याग्रहीमाथि दूराग्रह राखेर बेवास्ता गर्नुभयो भने त्यसको ठूलो मूल्य तपाईँले चुकाउनु पर्नेछ’ थापाले भनेका छन्।
उनले डा. केसीका माग पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै उनको जीवन तलमाथि भएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, डा.गोविन्द केसीले राख्नुभएको कुनचाहिँ माग पूरा नहुने/गर्न नसकिने छ? कुन माग जनहित विपरीत छन्?’ उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन् ‘प्रमज्यू, ख्याल राख्नुहोला, यदि डा. केसीको जीवन तल–माथि भयो भने यसको शतप्रतिशत दोषी तपाईँ हो।’